Home News Wasiirka arimaha Gudaha oo Dhuusamareeb kawada Afduubka Xubnaha Baarlamaanka cusub ee Galmudug
Wasiirka arimaha Gudaha oo Dhuusamareeb kawada Afduubka Xubnaha Baarlamaanka cusub ee Galmudug
Wasiirka Arimaha Gudaha Xukuumada Federaalka Soomaalia Cabdi maxamad Sebriye oo ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug ayaa waxa uu halkaa kabilaabay xusulduub uu doonayo in xubno Dowladu ay wadato uu kusoo biiriyo Baarlamaanka Cusub ee Galmudug.
Dowladda Somaliya ayaa waxay hoteelada Magaalada Muqdisho qaarkood ku uruurineysaa dad ay damacsan tahay in ay gayso Magaalada Dhuusamareeb, si loogu biiriyo Baarlamaanka xigga ee Galmudug.
Xubnahan oo isugu jira siyaasiyiin, shaqaalaha dowladda, qurbajoog iyo dhalinyaro dalka wax ku baratay ayaa waxay dowladdu dejinaysaa qaar ka mid ah hoteelada Magaalada Muqdisho, ee inta badan la dejiyo martida dowladda. Dowladda ayaa waxay xubnahan sharuud uga dhigtay inay kasbadaan taageerada Odayaasha Dhaqanka ee beelahooda, wixii dhaqaale ahna ay dowladdu ku taageeri doonto.
Dowlada uu hogamiyo Farmaajo ayaa waxa ay dadaal xoogan ugu jirtaa qaabkii ay u afduubi leheed Doorashada Galmudug una keensa leheed xubno ayada taabacan waxaana hada muuqata oo baanaanka taalada awooda Dowlada dhanwalbaba hanoqotee waxaa laga walaacsanyahay qaabka ay u dheceyso Doorashada Galmudug iyo nooca doorasho oo ay galmudug wajahayasa waxaana aad usoo kordhaya cabshada ay qabaan Musharixiinta utaagan Xilka Madaxweyne ee Galmudug.